အသားအရေ ကွညျလငျစဖေို့ ညဘကျမှာ ဘယျလို ဂရုစိုကျနိုငျသလဲ? - Lifestyle Myanmar
အသားအရေ ကွညျလငျစဖေို့ ညဘကျမှာ ဘယျလို ဂရုစိုကျနိုငျသလဲ?
မိနျးကလေးတိုငျးက ကွညျလငျပွီး အပွဈအနာအဆာကငျးတဲ့ အသားအရကေို လိုခငျြကွတာခညျြးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ယနအေ့လုပျအရမျးရှုပျတဲ့ လူနမှေုပုံစံကွောငျ့ အသားအရကေို ဂရုစိုကျဖို့ အခြိနျရယျ၊ လုံ့လရှိဖို့ရယျက ပိုပွီးအရေးကွီးလို့လာပါတယျ။ skin care ကိုစိတျပါတဲ့နေ့ လုပျပွီး စိတျမပါတဲ့နေ့ မလုပျဘူးဆိုရငျ ဘာမှတိုးတတျလာမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒီဆောငျးပါးမှာ သငျ့အသားအရကေို ပွနျလညျ လှပလာစဖေို့ ညအခြိနျပုံမှနျလုပျနကွေ အသားအရထေိနျးသိမျးမှုကို အဆငျ့မွငျ့တငျဖို့ ရိုးရှငျးတဲ့ နညျးလမျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အောကျပါနညျးလမျးလေးတှကေ အရမျးကို ရိုးရှငျးပါတယျ။ ၅မိနဈ ၁၀မိနဈလောကျ အခြိနျပေးယုံနဲ့ သငျ့အသားအရကေို လှပစပေါလိမျ့မယျ။
၁။ အသားအရကေို Double cleanse လုပျပါ
ဖုနျနှငျ့ အညဈအကွေးတှေ၊ မိတျကပျတှေ အားလုံးကို ဖကျြဖို့ အပြော့စား oil-based cleanser သုံးဖို့လိုပါတယျ။ အဆီပွနျတတျတဲ့ အသားအရရှေိသူတှလေညျး oil-based cleanser သုံးနိုငျပါတယျ။ မိတျကပျအားလုံးကို ပကျြစဖေို့ Garnier Bi Phase Micellar Water ကိုအသုံးပွုဖို့ အကွံပွုပါတယျ။ micellar ပုလငျးကို လှုပျပွီး ဝါဂှမျးပျေါမှာ စှတျပါ။ မိတျကပျတှေ၊ အညဈအကွေးတှကေို ဖယျရှားဖို့ မကျြနှာ တပွငျလုံး ညငျသာစှာပှတျပေးပါ။ ဒီအဆငျ့ပွီးရငျ Face Wash မကျြနှာသဈဆပျပွာ ဒါမှမဟုတျ foaming cleanser ကောငျးတဈခုကိုသုံးပွီး မိတျကပျအကြှငျးအကနျြတှကေို ဖယျရှားပါ။ The Face Shop Rice Water Face Wash ကိုသုံးဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
၂။ Exfoliate လုပျပါ
ဒါက တဈပတျမှာ ၂ကွိမျ လုပျပေးနိုငျတဲ့ တခွားအဆငျ့ ဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျလုပျပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ စကျဝိုငျးပုံလှုပျရှားမှုဖွငျ့ exfoliator ကို ၁မိနဈ ၂မိနဈလောကျ မကျြနှာပျေါမှာ နှိပျနယျပေးပါ။ ရဖွေငျ့ သနျ့စငျပါ။ Exfoliate လုပျခွငျးက အရပွေားဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးပွီး အသားအရကေို ကနျြးမာလတျဆတျစပေါတယျ။ အမြားကွီး glow ဖို့လိုအပျတဲ့အတှကျ (ပြားရညျ၊ ကျောဖီ၊ သကွား၊ ဆနျမှုနျ့ စတာတှကေိုသုံးပွီး)homemade exfoliating Masks တဈခြို့ကို ပွုလုပျကွညျ့ပါ။
ဘယျ moisturiser ဖွဈဖွဈ သုံးနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ညလိမျးခရမျအဖွဈ ညလိမျးခရမျ၊ facial oils သို့ serum ကိုလညျးသုံးနိုငျပါတယျ။ ညလိမျးခရမျပုံမှနျအသုံးပွုခွငျးက အသားအရရေဲ့ အသှငျအပွငျ၊ texture ကိုတိုးတတျစပေါလိမျ့မယျ။ အသားအရကေို ပြော့ပွောငျးပွီး ရဓေါတျကောငျးကောငျး ရရှိစပေါလိမျ့မယျ။ ဆီရမျ သို့ အစိုဓါတျထိနျးခရမျတဈခုကို ပုံမှနျ အသုံးပွုခွငျးက သငျ့အသားအရနေုပြိုမှုကို ကွာရှညျထိနျးသိမျးနိုငျပါတယျ။
၄။ Eye Cream
မကျြလုံးတဈဝိုကျ နရောက ပထမဆုံးအိုမငျးလက်ခဏာတှပွေလရှေိ့သလို အရမျးနူးညံ့ပွီး ပိုဂရုစိုကျဖို့ လိုတာကွောငျ့ Eye Creamကို လုံလောကျတဲ့ ရဓေါတျထိနျးသိမျးဖို့ ညဘကျမှာ လိမျးသငျ့ပါတယျ။
၅။ နှဈခွိုကျစှာ အိပျပါ
အိပျစကျမှုဆိုတဲ့ ဆေးကောငျးတဈခှကျရယူခွငျးက သှေးဖိအားကို ထိနျးညှိပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ရောငျရမျးမှုကို လြော့နညျးစပေါတယျ။ အသားအရကေို နုပြို ၊ တောကျပစဖေို့ စောငျ့ရှောကျပေးပါတယျ။
အသားအရကွေညျလငျတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ ရမြေားမြားသောကျတာ ဖွဈပါတယျ။ တဈနလေုံ့း ရမြေားမြားသောကျပေးခွငျးက အသားအရကေို ရဓေါတျရရှိစပေါတယျ။ အိပျရာမဝငျခငျ ရနှေေးနှေးတဈဖနျခှကျ သောကျပေးပါ၊ ရထေဲမှာ ပနျးသီးရှာလာရညျ ၁ဇှနျးထညျ့ပွီးလညျး သောကျနိုငျပါတယျ။ ရသေောကျခွငျးက သငျ့အသားအရကေိုသာ ကွညျလငျစတောမဟုတျဘဲ သငျ့ရဲ့ တခွား ကိုယျအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးမြားကိုလညျး သနျ့စငျစပေါတယျ။
အသားအရေ ကြည်လင်စေဖို့ ညဘက်မှာ ဘယ်လို ဂရုစိုက်နိုင်သလဲ?
မိန်းကလေးတိုင်းက ကြည်လင်ပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ အသားအရေကို လိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ယနေ့အလုပ်အရမ်းရှုပ်တဲ့ လူနေမှုပုံစံကြောင့် အသားအရေကို ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်ရယ်၊ လုံ့လရှိဖို့ရယ်က ပိုပြီးအရေးကြီးလို့လာပါတယ်။ skin care ကိုစိတ်ပါတဲ့နေ့ လုပ်ပြီး စိတ်မပါတဲ့နေ့ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘာမှတိုးတတ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးမှာ သင့်အသားအရေကို ပြန်လည် လှပလာစေဖို့ ညအချိန်ပုံမှန်လုပ်နေကြ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုကို အဆင့်မြင့်တင်ဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေက အရမ်းကို ရိုးရှင်းပါတယ်။ ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်လောက် အချိန်ပေးယုံနဲ့ သင့်အသားအရေကို လှပစေပါလိမ့်မယ်။
၁။ အသားအရေကို Double cleanse လုပ်ပါ
ဖုန်နှင့် အညစ်အကြေးတွေ၊ မိတ်ကပ်တွေ အားလုံးကို ဖျက်ဖို့ အပျော့စား oil-based cleanser သုံးဖို့လိုပါတယ်။ အဆီပြန်တတ်တဲ့ အသားအရေရှိသူတွေလည်း oil-based cleanser သုံးနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်အားလုံးကို ပျက်စေဖို့ Garnier Bi Phase Micellar Water ကိုအသုံးပြုဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ micellar ပုလင်းကို လှုပ်ပြီး ဝါဂွမ်းပေါ်မှာ စွတ်ပါ။ မိတ်ကပ်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ မျက်နှာ တပြင်လုံး ညင်သာစွာပွတ်ပေးပါ။ ဒီအဆင့်ပြီးရင် Face Wash မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ ဒါမှမဟုတ် foaming cleanser ကောင်းတစ်ခုကိုသုံးပြီး မိတ်ကပ်အကျွင်းအကျန်တွေကို ဖယ်ရှားပါ။ The Face Shop Rice Water Face Wash ကိုသုံးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
၂။ Exfoliate လုပ်ပါ
ဒါက တစ်ပတ်မှာ ၂ကြိမ် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ တခြားအဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ စက်ဝိုင်းပုံလှုပ်ရှားမှုဖြင့် exfoliator ကို ၁မိနစ် ၂မိနစ်လောက် မျက်နှာပေါ်မှာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ရေဖြင့် သန့်စင်ပါ။ Exfoliate လုပ်ခြင်းက အရေပြားဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ကျန်းမာလတ်ဆတ်စေပါတယ်။ အများကြီး glow ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် (ပျားရည်၊ ကော်ဖီ၊ သကြား၊ ဆန်မှုန့် စတာတွေကိုသုံးပြီး)homemade exfoliating Masks တစ်ချို့ကို ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
ဘယ် moisturiser ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ညလိမ်းခရမ်အဖြစ် ညလိမ်းခရမ်၊ facial oils သို့ serum ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ညလိမ်းခရမ်ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းက အသားအရေရဲ့ အသွင်အပြင်၊ texture ကိုတိုးတတ်စေပါလိမ့်မယ်။ အသားအရေကို ပျော့ပြောင်းပြီး ရေဓါတ်ကောင်းကောင်း ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ ဆီရမ် သို့ အစိုဓါတ်ထိန်းခရမ်တစ်ခုကို ပုံမှန် အသုံးပြုခြင်းက သင့်အသားအရေနုပျိုမှုကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံးတစ်ဝိုက် နေရာက ပထမဆုံးအိုမင်းလက္ခဏာတွေပြလေ့ရှိသလို အရမ်းနူးညံ့ပြီး ပိုဂရုစိုက်ဖို့ လိုတာကြောင့် Eye Creamကို လုံလောက်တဲ့ ရေဓါတ်ထိန်းသိမ်းဖို့ ညဘက်မှာ လိမ်းသင့်ပါတယ်။
၅။ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပါ
အိပ်စက်မှုဆိုတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်ခွက်ရယူခြင်းက သွေးဖိအားကို ထိန်းညှိပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ အသားအရေကို နုပျို ၊ တောက်ပစေဖို့ စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။
အသားအရေကြည်လင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ရေများများသောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး ရေများများသောက်ပေးခြင်းက အသားအရေကို ရေဓါတ်ရရှိစေပါတယ်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် ရေနွေးနွေးတစ်ဖန်ခွက် သောက်ပေးပါ၊ ရေထဲမှာ ပန်းသီးရှာလာရည် ၁ဇွန်းထည့်ပြီးလည်း သောက်နိုင်ပါတယ်။ ရေသောက်ခြင်းက သင့်အသားအရေကိုသာ ကြည်လင်စေတာမဟုတ်ဘဲ သင့်ရဲ့ တခြား ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း သန့်စင်စေပါတယ်။
လူအမြားစုမှာ နစေ့ဉျဆံပငျအနညျးငယျကြှတျခွငျးက ပုံမှနျဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျကခြွငျး၊ မီးဖှားခွငျး၊ နစေ့ဉျစိတျဖိစီးမှုခံစားရခွငျး (သို့) ကနျြးမာရေးအခွအေနအေမြိုးမြိုးရှိသူတှမှော ဆံပငျကြှတျပါတယျ။ သို့သျော အခြို့သောအခကျြတှကွေောငျ့ တဈခါတဈရံ ဆံပငျအလှနျအကြှံကြှတျပွီး ခေါငျးပွောငျလာတာကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးဖွဈလာရငျ စိတျမပူပါနဲ့။ ဆံပငျတှပွေနျလညျ သနျစှမျးစဖေို့...